Soo-saaraha Nidaamka Timo-jabinta | Tiknoolojiyad tayo sare leh & horumarsan - Ever-Power
Qorshooyinkaan nidaamka jaantusyada ama qaabeynta waxaa lagu dhisi karaa qaabab badan adoo adeegsanaya sanduuqyada bevel, matoorrada, sanaadiiqda gawaarida la yareeyo, fallaadhihii wadista, isku xirnaanta, tubbada tubbada iyo aaladaha xakameynta dhaqdhaqaaqa.
Afar ka mid ah qaabeynta ugu weyn ee nidaamka ayaa noqon doona 'H', 'U', 'T' iyo 'I' oo loo habeeyay nidaamyada jacking. U fiirso in jaakado badan oo fur lagu xiro ay si wada jir ah ama koronto ahaan ugu wada xirmi karaan. Midda labaad ayaa waxtar leh haddii aysan jirin meel lagu xiri karo fallaadhihiisa.
H-Qaabdhismeedka Jacking Configuration
Nidaamka Xidhmada ee I-Configuration
Nidaamka Tilmaamida T-Configuration
U-Qaabeynta Qalabka Wareejinta
Sidee Nidaamka Jiingado u shaqeeyaa
Wax soo saarka jaakada lagu xiro ayaa ah halka dhowr jaakad lagu xiro iyadoo lagu dhexjiro heesta si loo gaaro dhaqdhaqaaq toosan. Nidaamka jaakada wareejinta sidoo kale guud ahaan waxaa loo yaqaan karaa "jacking system".
Fursadda ay si isdaba joog ah iskugula xiri karto jaakado kala duwan si markaa ay u guuraan heesta ayaa ka mid ah faa'iidooyinkooda ugu wanaagsan. Qorshooyinka caadiga ah waxay ku lug leeyihiin jaakadaha fur, sanduuqyada qalabka wax lagu xiro, matoorrada, sanaadiiqda gawaarida lagu yareeyo, fallaadhihii wadista, isku xidhka iyo tubbada tubbada.
Nidaamka loo yaqaan 'Jacking Systems' wuxuu leeyahay 2 astaamood oo aasaasi ah:
Waxay u oggol yihiin dhaqdhaqaaqaas culeysyo waaweyn oo lagu wado hal mishiin oo tusaale ahaan 4 x ME18100 jaakado ah oo lagu diyaariyey gudaha aaladda qalabka wax lagu duubo waxay dhaqaajin karaan wax badan oo 400 Te (4000kN) ah.
Xamuulka taageerada ayaa si siman uga badan aag aad u weyn tusaale 20Te ku xamuul in ka badan aag 24m2 ah adoo adeegsanaya afar wiish oo xajmi ah oo leh 6m x 4m dhexda dhexda.
Caadi ahaan nidaamyada jaantuska ayaa si isdaba joog ah ugu xiran inta u dhexeysa shay kasta oo lagu dhex wado nidaamka. Si kastaba ha noqotee nidaamyo dijitaal ahaan ku xiran ayaa sidoo kale la heli karaa. Intii lagu gudajiray nidaamyadan jaakadaha wax lagu duubo shaqsi ahaan ayaa loo habeeyay oo lala jaan qaadayaa nidaamka xakamaynta elektarooniga ah iyo wareegga jawaab celinta. Tani sidoo kale waa la ballaarin karaa si loo hubiyo in nidaamyo fara badan oo jajab ah oo xiriir la leh la iswaafajiyo / la xakameeyo si dijitaal ah oo u oggolaanaya hababka dhaqdhaqaaqa tooska ah ee tooska ah inay dalabyo uga helaan baaxadda weyn.
Waxay u fasaxday Awoodda Awoodda inay siiso xalalka nidaamka jaakadaha qaybaha badankood. Noocyada wax soosaarka ha ahaadaan bir, shicib, baabuur, warqad ama tamar waxay noqon doonaan kuwa ugu muhiimsan ee adeegsada nidaamyada jacking si kastaba ha noqotee codsiyada tusaale ahaan garoomada, isgaarsiinta iyo cilmi baarista waxay kaloo shaqaaleeyaan nidaamyada jaakadaha ee naqshadaha waaweyn iyo kuwa yaryar.
Iyadoo aan loo eegin dalabka Awoodda Jacks waxay leeyihiin faham iyo waayo-aragnimo xaqiijineysa in dukaameeyayaashu ay heli doonaan xalka habka ugu wanaagsan ee jacking system.